Imali eneemveliso eziguqukayo 2021 | Uncedo kunye noncedo-VC-Imfihlo
Yongezwa nje kwinqwelo yakho
Jonga inqwelo ()
Le ngcebiso inokutshintsha ubomi bakho!
Iividiyo ezivela kumaqabane aphumeleleyo
Cinga ngokwehlukile! -kwaye nawe uya kuba yingcali kwinethiwekhi yethu
Uthungelwano lwe-VC-Secret Solution Network ikunika ithuba lokubonelela ngoncedo lwabasetyhini kumabhinqa aselula adinga umbono ongaqhelekanga kunye nempumelelo.
Ngenxa yoko, uya kufumana umbulelo omangalisayo kunye nembuyekezo ephezulu ngaxeshanye!
Ibali lethu lempumelelo ...
isekwe kumaxabiso acacileyo agcinwa ngononophelo: intsebenziswano enobulungisa, eyona mgangatho ubalaseleyo kunye nomvuzo ogqwesileyo.
Vala [ividiyo_isihloko] ividiyo
Dlala [ividiyo_isihloko] ividiyo
Misa okwesikhashana [ividiyo_isihloko] ividiyo Qalisa kwakhona [ividiyo_sihloko] ividiyo
Ngaba unazo ngokwaneleyo iziphumo zoqoqosho zentlekele yaseCorona kwaye ekugqibeleni ufuna ukuhlala kwakhona? Emva koko ujoyine iqela lethu lehlabathi kwaye uqalise nathi. Zuza ekuthandeni iimveliso zethu!
Ngoku ezethu zinayo ngokupheleleyo Iimveliso ze-niche zotshintsho inomtsalane kakhulu kwihlabathi liphela kwaye inceda abasetyhini abancinci ukuba basombulule ingxaki yabo. Ngeyakho ubuntu unganegalelo elifanelekileyo ekusindiseni la mabhinqa aselula kwimiphumo emibi. KULUNGILE ️❤️ yenza kwaye ufumane imali ngayo ngaxeshanye. Yintoni ebalasele ngakumbi? Nawe ungayenza eyakho Ikhefu qonda ngoku!
Yonke into esiyenzayo-siyenza ngcono! Zonke iimveliso "Zenziwe eJamani" kwaye azinabungozi empilweni.
Khusela ubomi-inwebu encinci enegazi lobuxoki! Ngeeyure ezi-2 kuphela, wonke umntu obhinqileyo uyakwazi ukubonisa umkhondo wegazi ofunekayo ngenxa yesicelo esilula esijolise kuko.
Ukuvuselela ijeli eyi-100 yelungu lobufazi- "Izinto zokuthambisa ezisondeleyo kumfazi ngamnye"
I-Revitalize100, ijeli eqinisa kakhulu kwilungu lobufazi, ihlala isetyenziswa ngokudibanisa neemveliso zethu ezimbini, i-hymen engeyiyo okanye iifomsile, ukugqibezela imvakalelo yobuntombi. Ijeli yokuqinisa esebenzayo iyasetyenziswa ngokubanzi ngabafazi ukuvuselela isigxina kwilungu lobufazi.
Iifasile zegazi zeVirginiaCare
Iifomsile zinomsebenzi ofanayo kwaye ziyimveliso elandelwayo elandelelweyo yehymen yokufakelwa. Ezi philisi zifakwa kwilungu lobufazi, ziyanyibilika kwaye izinto zikhutshwa njengomkhondo wegazi ngexesha lokwabelana ngesondo. Oku kwenza ukuba ubuntombi bulinganiswe ngendlela ekujoliswe kuyo kwaye kungqinwe ngokwenyani.
Qinisekisa ubuntombi? Hayi, akukho joke - iseyinyani ngo-2021! Kodwa sinesona sisombululo silula kunye nobuchule esilungele ukusombulula ingxaki efihliweyo yabasetyhini abaselula!
Singoovulindlela ukusukela ngo-2010 kwaye sikunika ithuba lokuba ube lilungu lenethiwekhi yethu! Isidingo seemveliso zethu asikho kuyo yonke i-Yurophu, e-Afrika nase-Asiya, kodwa kwihlabathi liphela. Kukho mhlawumbi nabo bachaphazelekayo kwimeko yakho abanokuvuya ukufumana izindululo kunye nenkxaso! Mhlawumbi nakwindawo ohlala kuyo!? Siziqhelisa ngokucacileyo kolu luvo luphelelwe lixesha, kodwa ngelishwa ingxaki iseyinyani ebuhlungu kwaye inokwenzeka ukuba abafazi abancinci bayisombulule ngokukhawuleza nangokulula. Ngobuchule bokuyilwa kweemveliso zeVirginiaCare, sidale ithuba lokuba le ngxaki isuke endleleni ngendlela yotshintsho. Ngenxa yoko, unokwenza imali ngokuqhubekayo. Ngenethiwekhi yethu entsha, sinokufikelela okuninzi ngakumbi. Sincede amawakawaka amabhinqa aselula aqinisekisa ubuntombi babo ngaphambili. Injongo yethu enkulu yaqala kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, kwaye sikunye nawe singathanda ukuyisasaza kakhulu. Thatha isigqibo sokuxhamla kumbono omnandi ngandlela zonke! Cebisa uncedo lwakho kwaye ujonge kumbulelo kunye nolwaneliseko lwezezimali ngaxeshanye!
Ngelishwa asinaso isisombululo kwingxaki yokwenyani kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba ngamashumi eminyaka ngaphambi kokutshintsha kokucinga!
Kodwa khawufane ucinge - ngaxa lithile umntu uza kubutyala ubomi bakhe kuwe ...
Ugqiba impumelelo yakho!
Uyafuna ukuba lapho? Yiba yinxalenye yenethiwekhi yethu! Siza kukunceda ngawo onke amava wethu esiye sakwazi ukuwahlanganisa kwiminyaka eli-10. Sikunika zonke izinto zethu zokuthengisa! Kwinyathelo elilandelayo, siza kukubonisa indlela yokubhalisa kunye nento onokuyifumana. Nika ubomi bakho umceli mngeni omtsha kwaye ube liqabane elixabisekileyo kwi-VC-Secret Solution Network.
I-30% yokuhlawula ngokuthe ngqo + i-5% yekhomishini yamaqabane ebomini
Ngokubhalisa kwinethiwekhi yethu, okoko nje ikhontrakthi isebenza, uyakufumana I-30% yayo yonke iodolo ephumeleleyo, ethi igqithiswe ngekhonkco lakho leqabane lakho. Uyazuza kuwo onke amaqabane abhalise ngekhonkco lakho kunye nekhomishini yobomi ye-5% yentengiso yabo! Ngale nto wakha ingeniso yesiqhelo.
ISICWANGCISO SEKHOMISHINI ISIXHOSA VERSION
Imodeli yeKhomishini ye-VC eyimfihlo yaseJamani
Inzuzo enokubakho igqityiwe kukuzibophelela kwakho
Nguwe wedwa ogqiba ukuba uphumelele kangakanani. Akukho mda ungaphezulu! Ngobhaliso lwakho ufikelela kwangoko kuzo zonke izinto eziyimfuneko zentengiso kwaye unokuthengisa iimveliso kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi. Uyilo lwakho alunamida. Sebenzisa imidiya yoluntu okanye wakhe iwebhusayithi yakho. Ukwanalo nethuba eliqaqambileyo lokubonelela ngeemveliso ngqo koogqirha, kwiikhemesti okanye kwabanye abathengisi, njengoko sinika umdla wokuthengisa ngokuthengisa okuthengisa ukutya.
Ukungena ngokulula kwiVirginiaCare-Inethiwekhi eyimfihlo
Endaweni ye-129 EUR ubhaliso lolwexeshana ngoku khulula. Uya kufumana iphakheji yokuqala kunye neemveliso ezi-3: i-hymen, iicapsule kunye ne-Revitalize100 yejeli. Ukuba usebenzisa iseti yeenjongo zokwazisa okanye uyithengise kuyo, ubhaliso luyakuba simahla. Ukufikelela kwi-Intanethi kuzo zonke izinto zethu zokuthengisa. Ukongeza, ikhonkco lakho levenkile kunye nesoftware yolwabiwo oluzenzekelayo lweeodolo kunye nokuhlawulwa kweeekhomishini.
Iintlawulo zihlala zenziwa nge-01 yenyanga nganye, ngokubanzi ngePayPal okanye ngokutshintshwa kwebhanki.
ngoku simahla ixesha elifutshane
Izindululo zevidiyo ezivela kumaqabane aphumeleleyo
Yenza inkululeko yezemali ngokupapasha ithemba kunye nethuba. Umxholo ulula!
Kuphi, kangakanani kwaye usebenza nini isigqibo sakho kule nethiwekhi. Unamathuba angenamda onokuzilawula ukuba uqala ngesimo sengqondo esifanelekileyo. Ngokusebenzisa ngokufanelekileyo i-Intanethi kunye nemithombo yeendaba kwezentlalo, unethuba lehlabathi lokusebenzisa i-VC Secret Solution network njengethuba lomntu kunye nokucebisa ngeemveliso njengesisombululo seengxaki.
VirginiaCare kumajelo eendaba
Uxwebhu lwe-ZDF olubonisa imveliso yethu njengesisombululo esingxamisekileyo!
Izibonelelo zakho xa uthi krwaqu:
Akukho mali iphezulu
Ukungena njengeqabane lokuthengisa / kumthengisi kunokwenzeka ukusuka kwi-129 EUR.
Akukho ntengo iphantsi yokuthenga / ubuncinci bokuthengisa
Akukho zibophelelo zincinci zokuthenga.
Akukho bungozi / akukho khontrakthi
Ungayiphelisa intsebenziswano ngalo naliphi na ixesha ngaphandle kweziphumo.
Ulawulo lwexesha oluvulekileyo
Zenzele isigqibo sokuba uza kusebenza nini, phi kwaye usebenza kangakanani, nokuba ngumvuzo osecaleni okanye ngokuzinikela ngokusisigxina
Kwisithuba nje seentsuku ezi-1-2, iodolo oyifakileyo iya kupakishwa eJamani kwaye ithunyelwe ngohambo lokuhambisa
Uku-odola iimveliso njengoko kufuneka kwaye kungabikho mngcipheko kwaphela. Akunyanzelekanga ukuba wenze iintlawulo kwangaphambili kwaye ugcine iimpahla.
Amathuba okufumana umvuzo
Ngokubhaliswa kwinethiwekhi yethu, okoko nje ikhontrakthi isebenza, uyakufumana i-30% yayo yonke iodolo ephumeleleyo kunye nokubhaliswa kwamaqabane, okulamliweyo ngekhonkco lakho lomlingane.
Ukongeza, uyaxhamla kuwo onke amaqabane abhalise ngekhonkco lakho kunye nekhomishini yobomi ye-5% yentengiso yabo!
Wakha ingeniso yesiqhelo kunye nayo.
© 2022, Imfihlo yeVC
Sebenzisa iifoloko ezisekhohlo / ezisekunene ukuhamba indlela ye-slideshow okanye iswayipha ngakwesobunxele / ngasekunene ukuba usebenzisa idivayisi yeselula
Cofa iqhosha lesithuba kunye neqhosha lesitshixo ukwenza ukhetho.